Yakakwirira-mhando zvipfeko inogara ichiwana mutengi wayo. Uye kana zvasvika pazvinhu kubva pasirese inozivikanwa yeFinnish brand FiNN FLARE, saka panogona kunge pasina mubvunzo - kutenga chinhu chakadai ...
Vese varume nevakadzi vanoda majean. Wese munhu achabvumirana neshoko iri. Zvinotaridza kuti idzi hembe dzakasarudzika, nekuti dzinotaridzika senge pane vese varume kana vakadzi. Zvisinei, izvi hazvisi zvechokwadi. Mukuru wechikoro ...
Kune vazhinji vanogadzira shangu nhasi. Pakati pavo, Vitacci inogona kusiyaniswa. Bhutsu yechiratidzo ichi dzinosiyaniswa nerunako, kuwedzeredza uye runako. Pano iwe unowana kwete chete chic chitsitsinho bhutsu, asi ...
Zvipfeko zvevana "Lappy Vana": wongororo, mitengo, tsananguro
Vese vabereki vanoyeuka chaizvo kuti inonakidza, uye inonyanya kukosha, kufamba kwakachengeteka kwemwana wavo kunotanga nesarudzo yehembe dzakakodzera. Uye kana mumwaka unodziya iyi nyaya haina kunyanyisa, ...
Vese vasikana vanofarira kunotenga, asi pane mamiriro ezvinhu apo mufaro uyu unova usingakwanisike. Kana iwe uchifanira kushanda zvakanyanya kana kugara nemwana, panenge pasina nguva yako, uye kubva pane izvi ...
"Chanel" - sutu yevakadzi vane chimiro uye vane chivimbo
Mune yakasarudzika pfungwa, iyo Chanel yevakadzi sutu ndeye maviri-chidimbu tweed. Inosanganisira siketi nejekete. Mugadziri ane mukurumbira akataura kuti musiyano wakanaka unofanirwa kusanganisa vese varume nevakadzi ...
Musoro wevakadzi: mhando uye tsananguro. Maitiro ekusarudza ngowani yemurume
Heti dzevarume dzave dzichishandiswa pachinangwa chavo kubva kunguva dzekare. Kuvonga kwavari, vamiriri vebonde rakasimba vakapukunyuka kubva kunotonhora mamiriro ekunze, kupisa uye zvimwe zviitiko zvemuchadenga. Panguva ino, heti dzave ...
Vanoda Loaf: chii uye chii uye chavanofanira kupfeka nacho
Fashoni iri kuchinja nekukasira zvekuti dzimwe nguva zvinonetsa kuteedzera zvigadzirwa zvese zvitsva. Muchikamu chino, isu tichataura nezve yakadai yewadhiropu yakadzama seyafafita: zvavari uye zvavakakwana ne ...
Nguva yechando inguva yezviitiko zvemashiripiti uye zviitiko zvinonakidza. Kufamba, kutsvedza, chando mapikicha, uye kungoenda kuchitoro pane crispy chena chena zvinofadza. Uye izvi zvinofadza ...
Hutsanana hweshangu nembatya. Kupfeka uye shangu kutarisira
Hutsanana hwakagara rwuri chikamu chepfungwa yerunako. Kumeso, muviri, imba, mbatya uye bhutsu kutarisirwa kwakamira kuve chimwe chinhu kubva mune zvakajairwa - idzi dziri nyore nzira dzezuva nezuva dzinopa kuchengetedza hutano. Kukosha…
Madhirezi "Faberlik": kuongororwa kwevatengi
Madhirezi chinhu chewadhirobe, pasina iyo hapana mukadzi anogona kufungidzira hupenyu. Chinhu chikuru hachisi chekukanganisa pakutenga. Zvinhu zvinofanirwa kuve zvese zvakanaka uye zvemhando yepamusoro. Bhadhara yako ...
Ungasarudza sei masokisi ekuchengetera kuti ataridze anoshamisa
Pakutanga kuona, zvinoita sekunge hapana chakaoma mukusarudzwa kwetights. Vazhinji vasikana vane chokwadi chekuti vanoziva kusarudza yakasarudzika saizi yekuchengetedza. Ungaita sei kusarudza zvakadaro zvekuti haufanire kugara ...
Iyo yakanyanyisa dhizaini iri yakapusa uye yakasununguka zvipfeko sarudzo kune vakadzi vakaneta nekuzvichengeta ivo mukati meimwe miganhu. Iyo fashoni fashoni zvipfeko zvehombodo, sekunge zvakatorwa kubva pabendekete remumwe munhu. Nzvimbo inokosha…
BASK - pasi majaketi evakadzi nevarume: wongororo
Mamiriro ekunze mupasi rese rakakura akasiyana kwese kwese, uye kumwe kunhu vanhu vanofanirwa kujairira kupisa kusingatsungiririki, kumwe kunogara vachiona kudengenyeka, uye kumwe kunamira kutsetseka kwakadzika, kutonhora uye dutu ...
Zvekupfeka ne grey gown? Mafashoni Matipi
Mutsika, grey inoonekwa senge yakapfava imwe nzira kune yakasviba nhema. Iyo inokodzera zvakakwana muhofisi, yakasarudzika, yakasarudzika uye yemitambo kutaridzika. Izvo zvese zvinoenderana nemabatiro aungaita nechimiro uye nemimvuri inowirirana. ...
Chiziviso cherudo chinga nyorwa here muchidimbu chinoratidzika sechinyakare? Ehe, kana chiri chindori chevadikani vaviri, icho chinosarudzwa nemunhu anoda kureurura kumweya wake wepamoyo uye nenyika mu ...
Chii chaunofanira kupa ku30 kune shamwari: sarudza chipo chakanakisa
Makore makumi matatu chiitiko chakakomba. Nekudaro, iri harisi iro zera iro musikana anoda kuviga, uye nekudaro zororo rinowanzo kupembererwa pamwero mukuru. Kana iwe ukakokwa kumhemberero yakadaro, saka ...
Anoshamisa Katsi Ziso Magirazi
Magirazi ezuva "ziso rekati" ave akakurumbira kubvira makore akanakisa aMarilyn Monroe. Uye kusvika parizvino, iyi mhando yefuremu inoramba iri kudiwa pakati pevakadzi pasi rese. Mushure mezvose, yega ...
Niqab: chii ichi? Tsananguro, mufananidzo
VaMuslim vanonamata zvakanyanya. Vamiriri vetsika dzechiIslam vanonyatsotevedzera tsika nemitemo yechitendero. Iyi mitemo inosanganisira inosungirwa kupfeka nevakadzi veheti dzinovhara bvudzi ravo. Chimwe chezvinhu zvechinyakare zvewadhi yeArabia ...